Nagarik Bazaar - मिडरेन्ज मूल्यमा फ्ल्याग्शिप स्तरको स्मार्टफोन - अप्पो एफ ११ र एफ ११ प्रो
मिडरेन्ज मूल्यमा फ्ल्याग्शिप स्तरको स्मार्टफोन - अप्पो एफ ११ र एफ ११ प्रो
हालै निकै चर्चित चाइनिज अप्पोको सेल्फीसँग केन्द्रित रहेको एफ स्मार्टफोनको लाइनअपमा नयाँ सदस्यहरू थपिएका छन् - यिनीहरू हुन् अप्पो एफ ११ र एफ ११ प्रो । नच बिनाको फुलस्क्रिन डिस्प्ले, आकर्षक डिजाइन र ४८ मेगापिक्सलको क्यामरा सहित अप्पोले मिडरेन्ज मूल्य मै पनि फ्ल्याग्शिप स्तरको स्मार्टफोन प्रदान गर्ने प्रयास गरेको छ । र, यस कार्यमा अप्पो धेरै हदसम्म सफल पनि भएको छ ।
अप्पो एफ ११ र एफ ११ प्रोको प्राविधिक विशेषताहरू
ग्लासलाई रिफाइन गरेर तयार गरिएको आकर्षक डिजाइन
६.३ इन्चको फुलस्क्रिन फुल एचडी डिस्प्ले
मेडियाटेकको १२ न्यानोमिटरमा निर्मित पी७० प्रोसेसर
४ वा ६ जीबी र्याम
६४ वा १२८ जीबी आन्तरिक स्टोरेज, मेमोरी कार्ड लाग्ने
४८ मेगापिक्सलको मुख्य क्यमरा, ५ मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर
१६ मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामरा
४००० mAh को ब्याट्री
२० वाटको फास्ट चार्जर
सुपर फास्ट फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर
यी दुई मोडलमा भिन्नता के ?
अप्पो एफ ११ र ११ प्रो बीचमा केहि पनि प्राविधिक भिन्नता रहेको छैन - भिन्नता रहेको छ त सेल्फी क्यामराको प्रविधिमा । एफ ११ प्रोमा मोटरबाट चल्ने १६ मिगापिक्सलको पप अप क्यामरा राखिएको छ भने एफ ११ मा उक्त मोटरको सट्टामा पानीको थोपा जस्तो आकार गरेको नच राखिएको छ । दुवै मोडलमा रहेको सेल्फी क्यामराको गुणस्तर भने एकै हो ।
एफ ११ र ११ प्रोमा भएको फ्ल्याग्शिप स्तरको विशेषताहरू
डिजाइन: अप्पो एफ ११ र ११ प्रो को डिजाइन निकै आकर्षक रहेको छ । ग्लास जस्तै देखिने गरि रिफाइन गरेर बनाइएको प्लास्टिकको प्यानल र उक्त प्यानलमा देखा पर्ने ढाँचाले यस स्मार्टफोनलाई निकै आकर्षक बनाएको छ ।
डिस्प्ले: अप्पो एफ ११ र एफ ११ प्रोको आइपीएस डिस्प्ले १०८० x २३४० पिक्सल रेजोलुसनको रहेको छ । उच्च रेजोलुसन हुनुका साथै यो डिस्प्लेको कन्ट्रयास्ट निकै नै अब्बल रहेको छ । ब्राइटनेसको हिसाबमा पनि अप्पो एफ ११ र एफ ११ प्रो राम्रो नै मान्न सकिन्छ ।
मोटर संचालित सेल्फी क्यामरा : अप्पो एफ ११ प्रोमा साधारण नचको सट्टामा मोटरबाट चल्ने सेल्फी क्यामरा राखिएको छ । यसले गर्दा अप्पो एफ ११ प्रोको अगाडीको भाग पूर्ण रूपमा नच मुक्त हुनजान्छ । प्रयोगको बेलामा मात्र उक्त सेल्फी क्यामरा मोटरको सहायताले सुचारु हुन्छ भने प्रयोग नभएको खण्डमा सेल्फी क्यामरा मोटरको सहायताले स्वत: बन्द हुन्छ । उक्त सेल्फी क्यामरा भने १६ मेगापिक्सलको रहेको छ । एफ ११ मा नचको बीचमा रहेको सेल्फी क्यामरा पनि अप्पो एफ ११ प्रो कै गुणस्तरको हो ।
राम्रो परफरमेन्स : यी दुवै मोडलका स्मार्टफोन भएको मेडियाटेकको १२ न्यानोमिटरमा निर्मित पी७० प्रोसेसरले गर्दा दुवै मोडल चलाउदा निकै द्रुत र निर्मल रहेका छन् । दुवै मोडलमा ६ वा ८ जीबी र्याम उपलब्ध गराइएको छ जुन जस्तो सुकै प्रयोगकर्ताका लागि पनि पर्याप्त छ ।
उच्चस्तरीय क्यामरा: दुवै मोडलमा ४८ मेगापिक्सलको मुख्य क्यमरा र ५ मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर रहेको छ । उक्त ४८ मेगापिक्सल क्यामरामा ठूलो एफ/१.८ को लेन्स राखिएको छ जसले थोरै उज्यालो भएको स्थानमा पनि राम्रो तस्विर खिच्न सक्छ । यस लगायत क्यामरामा ड्याजल कलर मोड, अल्ट्रा नाइट मोड र पार्टीएट मोड जस्ता विविध मोडहरू रहेकाछन् ।
ठूलो ब्याट्री, सुपर फास्ट चार्जिंग: अप्पो एफ ११ र ११ प्रो दुवै मोडलमा ४००० mAh को ब्याट्री छ जुन साधारण प्रयोगकर्ताका लागि दुई दिनको प्रयोगको लागि पर्याप्त हुन्छ । यस लगायत अप्पोले बक्सा मै २० वाटको सुपर फास्ट भूक चार्जर उपलब्ध गराएको छ । उक्त चार्जर २० वाटको रहेको छ - तुलनाका लागि एप्पलले आफ्नो नयाँ आइफोनमा केवल ५ वाटको चार्जर समावेश गर्दै आएको छ । उक्त २० वाटको चार्जरले अप्पो एफ ११ र एफ ११ प्रोको ब्याट्री ३० मिनट मै ४०% सम्म चार्ज हुन्छ ।
के छैन फ्ल्याग्शिप स्तरको ?
माइक्रो युएसबीको प्रयोग: युएसबीको नयाँ स्तर अर्थात् युएसबी सी आएको लगभग अर्ध दशक हुन लाग्दा पनि उक्त पोर्ट यो स्मार्टफोनमा प्रयोग नहुनु खल्लो अनुभव हो ।
4K रेजोलुसनमा भिडियो खिच्दैन: यस स्मार्टफोनले केवल १०८० पी मा मात्र भिडियो खिच्न सक्छ । यस स्मार्टफोनमा प्रयोग गरिएको प्रोसेसरले 4K भिडियो खिच्न सक्षम भएपनि अप्पोले उक्त फिचर क्यामरा एपमा उपलब्ध गराएको छैन । धेरै प्रयोगकर्ताले यसै पनि फुल एचडीमा मात्र भिडियो हेर्ने वा खिच्ने भएकाले पनि धेरै प्रयोगकर्ताले यो फिचर नभएको कुरा महसुस पनि गर्ने छैनन् ।
अप्पो एफ ११ : नेरु ३७,९९०
अप्पो एफ ११ प्रो : नेरु ४७,९९०